Pet Inoenderana Franchise yekutengesa | Mukana weFrancise | Franchiseek
Pet Inoenderana Franchise
Franchiseek»Mukana weFrancise»United Kingdom»Pet Inoenderana Franchise
Inoratidzwa Pet Inoenderana Franchises
Hapana Franchise Yakawanikwa!
Nguva pfupi yapfuura Inosangana Franchises
Nekudiwa kuri kuramba kuchikosha kwevanoita zvipfuyo sekufamba kwembwa, kuchengetwa kwezvipfuyo uye vanhu vazhinji vava kutanga kuvimba nemabasa ekuchengeta zvipfuyo kuti vatore mabasa epamba aya uye kutarisira imbwa dzavo. Iyi indasitiri inokura nekukurumidza uye usangozvitora izwi redu nayo. Nekuti nhasi tichagovana mamwe manhamba akatenderedza epasi rese indasitiri uye hombe revatengi iripo paangapa mari.
Statistics kutenderera peturu indasitiri.
Isu zvino ticha nyora mashoma uwandu akatenderedza mutengo wevatengi uye nekukura kwese kwemaindasitiri kwete chete mune zveupfumi asiwo huwandu hunoshamisa hwemikana yekushandira iyo inopiwa neiyi indasitiri inonakidza.
Vanhu vekuAmerican vanoshandisa mari inodarika madhora makumi mashanu emadhora pagore pazvipfuyo zvavo
24% yevakuru veUK vane katsi ine huwandu hunofungidzirwa hwe mamiriyoni 10.9 katsi.
26% yeUK vanhu vakuru vane imbwa ine huwandu hunofungidzirwa hwe mamiriyoni 9.9 imbwa dzemhuka.
Vanopfuura hafu yevanhu pasi rese vane mhuka inogara navo
Argentina, Mexico neBrazil vane yepamusoro senti yevaridzi vemhuka, ichiteverwa neRussia neUSA
Anopfuura mapaundi mazana maviri nemakumi mashanu emamiriyoni emapaunzi eBritain anoshandiswa mwedzi wega wega kuUK pazvipfuyo.
Imbwa ndicho chinonyanya kudhura peturu kuchengetedza nevanhu vachishandisa £ 178 pamwedzi paavhareji.
Aya manhamba anoratidzei kune indasitiri yepasi rose pasi rose?
Nhamba idzi dzinoratidza dura rakakura revatengi uye huwandu hwakakura hwevanhu hwaunofanira kushambadza nawo kana uchimhanya. Saka aya manhamba akabatsira chero munhu anotarisira kuti aise mari muzvipfuyo zvine chekuita neruzivo rwakanaka mumusika wemabasa ehupfu uye kudiwa kukuru.
Ndedzipi mhando dzakasiyana dzezvipfuyo franchise zviripo?
Kune akawanda akasiyana pet franchise pasi rose, zvakasiyana kubva kune imbwa kufamba munzira yese kusvika kune premium imbwa hotera. Saka ini ndingakurudzira zvakanyanya kuti utaridze kwenguva refu kuburikidza neyepanyama peturu nzvimbo kuti uwane zano rekuti ndeipi ringaite zvakanyanya kwauri kubva kuFranchiseek tinopa huwandu hwakakura hwemafurati akasiyana nemaindasitiri akasiyana. Zvakare kana iwe usina chokwadi nezvekutsvaga basa muchipfuva chefodya asi uchifarira kufambiswa nemhepo ini ndinokurudzira kuti uverenge kuburikidza neizere chedu peturu Franchise dhairekitori.
kodzero Rudzi Kutsvaga
Sarudza chikamuZveMota FranchiseBhizinesi Advisory FranchisesCare FranchiseKudya FranchiseVana FranchiseKuchenesa FranchiseShopu yeKofi FranchiseCourier FranchiseKufambidzana FranchiseDzidzo FranchiseZvemari FranchiseFranchise ResalesBindu FranchiseHutano uye Runako FranchiseHutano uye Kusimba FranchiseImba Yakavakirwa FranchiseKuvandudza KushaHoteli FranchiseInternet Yakavakirwa FranchiseMutengo wakaderera FranchiseManagement FranchiseMerchandising FranchisePet Inoenderana FranchisePlumbing FranchiseZvivakwa FranchiseRetail FranchiseServices FranchiseSports FranchiseKufamba uye Kutandara FranchisesVan Kubva Franchise
Yakatangwa muna2008, Oakleys Grill & Pizzeria ndeye mhuri inomhanya nzvimbo yekudyira iyo yakatanga kuvhura masuwo ayo muYorkshire Dales guta…
Iyo Damp Detential Franchise Mukana weDampu Detension yakavambwa naRobert Horne muna2009. Kupa kuumbwa nekunyorova kuongorora kwe…
Kambani Overview Yakatangwa muna 2002, Monkey Puzzle Day Nurseries ndiyo yeUK yakakura kwazvo kuchengetedza vana Franchise uye wechitatu mukuru wekuchengeta vana mupi. Yakavambwa…
About Agency Express Iyo Agency Express Franchise ndiyo yeUK yakakura uye chete yenyika estate agency bhodhi kambani ine…
Akasarudzika Franchise Mukana neKofi yeBlue! Bhizinesi Kofi yeBlue yakagadzirwa kubva pasi kuti ive runhare rwakanyanya…
Chii chinonzi Bartercard uye ndeapi masevhisi aanopa? Kubva kuvambwa kweBarter Card muna 1991, mabhizinesi ave mukati me…
Razamataz Theatre Zvikoro yakavambwa muna 2000 uye inopa kudzidziswa kwakasiyana pakutamba, dhirairi uye kuimba pamwe nemikana inonakidza…
Join the UK's inotungamira yevana computa yevana Franchise Gadzirira vana ramangwana nerinonakidza uye rinonakidza tech makirabhu Isu Tinounza ...